No. 1722, Sunday, February 18, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 1722, Sunday, February 18, 2018
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၄ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈)
မက္ကဆီကိုအရာရှိကြီးများ လိုက်ပါလာသော ရဟတ်ယာဉ်ပျက်မှုကြောင့် လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ တွင် သောကြာနေ့က အားကောင်း သော ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် အကြီးတန်းအရာရှိများက ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အပျက်အစီး အခြေအနေများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် ထိုရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျရာ ကလေးတစ်ဦးအပါ အဝင် လူ ၁၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် တွင် မက္ကဆီကို ပြည်ထဲရေးဝန် ကြီးနှင့် အော်ဆာကာပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ လိုက်ပါလာ သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရဟတ် ယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွင်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာမရခဲ့ပေ။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ တိုင်စာများတွင် မြေယာအငြင်းပွားမှုပြဿနာ အများဆုံးဖြစ်
၂၀၁၇ အတွင်း အမျိုး သားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သို့ တိုင်စာများတွင် အစိုးရ၊ တပ် မတော်တို့က သိမ်းယူထားသော မြေယာများနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်စာ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးယုလွင်အောင်က ပြောသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းသောဒေသများရှိ SMEs လုပ်ငန်းများအား ချေးငွေထုတ်ချေးမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ဖြေလျှော့ရန် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေး
ပြည်တွင်းရှိ အ သေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအား နည်းသည့်ဒေသများအတွက် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ ဖြေလျှော့ပေးရန် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်လှိုင်ဝင်းက တိုက
အခမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ရုပ်သံလိုင်းငါးလိုင်း မကြာမီ ကြည့်ရှုနိုင်မည်
ရုပ်သံလိုင်းသစ် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရသည့် ကုမ္ပဏီငါးခုနှင့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရုပ်သံလိုင်းများကို မကြာမီ ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ရီးရဲလ်ကွင်းတွင် ဘက်လိုက်ခဲ့သလို ပီအက်စ်ဂျီကွင်း၌ အိမ်ရှင်ကို မျက်နှာသာပေးစေလိုဟု နည်းပြပြောကြား
ပါရီ - ရီးရဲလ်ကို ၃-၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံး နိမ့်သည့် ပထမအကျော့ ကိုင် တွယ်ခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အီတလီကွင်းလယ်ဒိုင် ဂီယန်လူကာရော့ ချီကို ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြ v အမ်မရီ က ထပ်မံ ပြစ်တင်ထိုးနှက်ပြော ကြားသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးနေသေးသည့် ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက စစ်တွေစက်မှုဇုန် တည်ထောင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံး က မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထား သော ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင် စားမှု အဆိုပြုလ
ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးကို ကနေဒါက ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူ
ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့်ပတ် သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန် မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ပြီး နှစ်လခန့်အကြာတွင် ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း အနောက် ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်(နပခ)တိုင်း မှူးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင် စိုးအပေါ် သောကြာနေ့တွင်တား ဆီးပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ခဲ
စစ်တွေမြို့သစ် စီမံကိန်းတွင် မြေဝယ်ထားသူများက လိုအပ်ချက်အချက်အချို့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပထမဆုံး အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Sittwe Waterfront မြို့သစ်စီမံကိန်းတွင်မြေယာလုပ်ငန်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကုမ္ပဏီဘက်က မြေယာတန်ဖိုး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းဆိုလာခြင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ တိကျရေးနှင့် မြို့ပြစနစ
ရန်ကုန်မြို့အနီး ရစ်ခ်ျတာစကေး ၄ ဒသမ ၆ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်
မှော်ဘီမြို့အနီး ဗဟိုပြု ၍ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၄ ဒသမ ၆ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ရက်နံနက်က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းများတွင် အပြည့်အဝပူးပေါင်းရန်နှင့် ပူးပေါင်းရန်ပျက်ကွက်သူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူရန် လွှတ်တော်ကော်မတီအကြံပြု
အစိုးရဌာနအဖွဲ့ အစည်းများဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် လျာထားခြင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စိစစ်သုံး သပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် မြို့နယ် အဆင့်က စတင်ကာ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပူး ပေါင်းရန် ပျက်ကွက်သူများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီက အကြံပြု ထားသည်။
ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့်ပတ် သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန် မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ပြီး နှစ်လခန့်အကြာတွင် ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း အနောက် ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်(နပခ)တိုင်း မှူးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင် စိုးအပေါ် သောကြာနေ့တွင်တား ဆီးပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစိုးရက ပွင့်လင်းမြင်သာသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းရှိ စီမံကိန်းများကို ပြည်သူများ ကြိုတင်သိရှိနေဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဆို
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်သို့ မတင်ပြမီ အများပြည်သူ ကြိုတင်သိရှိနေခြင်းသည် အစိုးရက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ငွေကြေးကူညီမှုပေးရန် မြစ်ကြီးနားရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံ ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၁၁) စာပို့
ဘဏ္ဍာရေးအရ ကူညီမှု ပေးရန် မြစ်ကြီးနားရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များထံ အကြောင်း ကြားစာပေးပို့ထားကြောင်း ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIA) တပ် မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ် ရင်း (၁၁)မှ ရုံးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက အတည်ပြုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာသို့ လွှဲပြောင်းမည့် လူဦးရေရှစ်ထောင်ကျော်၏အမည်စာရင်းပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ နေရပ်စွန့် ခွာထွက်ပြေးသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးစိစစ်နိုင်ရန် ပထမအသုတ်လွှဲပြောင်းပေးမည့် လူဦးရေရှစ်ထောင်ကျော်၏ အမည်စာရင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာဘက်သို့ ပေးအပ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်မှ ချေးငွေရမည်ဆိုကာ ငွေယူခဲ့သူကို လိမ်လည်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်
နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်မှ ငွေချေးယူရန် အ ကျိုးဆောင်ခကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ် နှင့် ခြံပုံစံမူရင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး နှစ် လကျော်အထိ ချေးငွေမရ၍အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လိမ်လည်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဖောင်ကြီး၌ တောဆင်ရိုင်းနင်း၍ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး
လှည်းကူးမြို့နယ်ဖောင် ကြီးမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ နတ်ရေ တွင်းတောစခန်း ခြောက်ခွဲလမ်း ဆုံတွင် တောဆင်ရိုင်းနင်းခံရ၍ တံမြက်စည်းပင်ချိုးသူအမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ်နှင့် သမ္ဗန်တိုက်မှုတွင် ရေယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးကို အမှုဖွင့်
ရန်ကုန်ဝါးတားဘတ်စ် ယာဉ်နှင့် သမ္ဗန်တစ်စီးတိုက်မှု တွင် နှစ်ဖက်ရေယာဉ်မောင်းနှစ်ဦး စလုံးကို အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိက ပြောသည်။
၀ိုင်းမော်တွင် ကျပ်သိန်း ၃,၀၀၀ကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖမ်းမိ
၀ိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ ဗလ မင်းထင်ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းစစ် ဆင်ရေးဂိတ်၌ ကျပ်သိန်းသုံး ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ် ဆေးဝါးများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ကွတ်ခိုင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းမိ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် တောတွင်း တစ်နေရာတွင် အက်စစ်ပီပါ များအပါအ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း များကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ ကျင်းပနိုင်ရန် မြို့နယ် ၁၃ ခုသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ငွေထောက်ပံ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် တွင် ကျရောက်မည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပနိုင်ရေး ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၁၃ ခုသို့ တစ်မြို့နယ်လျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ ပြည်နယ်အစိုးရက ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဧရာဝတီလင်းပိုင် ယမန်နှစ်ထက် ခုနစ်ကောင် တိုးလာ
မန္တလေး-ဗန်းမော် ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတစ် လျှောက်ရှိ ဧရာဝတီလင်းပိုင် အကောင်ရေကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်တမ်း ကောက်ယူလေ့ရှိရာ ယခုနှစ်တွင် လင်းပိုင် ၇၆ ကောင် တွေ့ရှိပြီး ယမန်နှစ်ထက် အကောင်ရေ မြင့်တက်လာ ကြောင်း လင်းပိုင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
တူးတူးက ဆိုရိုကင်ကို အမှတ်ဖြင့်အနိုင်ယူပြီး WLC ချန်ပီယံခါးပတ် ကာကွယ်
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်ရိုးရာ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ WLC-4 မစ်ဒယ် ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကာ ကွယ်ပွဲတွင်မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကျော် တူးတူးက ယူကရိန်းလက်ဝှေ့သ မား ဆိုရိုကင်ကို အမှတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ လက်ရှိချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က နေပြည်တော် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားရုံ(B)၌ ကျင်းပသည့် အဆိုပါပွဲ ပထမအချီနှင့် ဒုတိယအချီတွင် နှစ်ဦးစလုံး အမှားစောင့်၊ အကဲစမ်းနေသဖြင့် ပွဲသည် ထင်သ လောက် မကောင်းခဲ့ပေ။ တတိယအချီတွင် ဆိုရိုကင်က အသာစီး ရရှိပြီး တူးတူးကို လက်သီးချက် များဖြင့် ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးနှစ်ချီတွင် အကြိတ်အ နယ်ဖြင့် အပြန်အလှန် ထိုးသတ် နိုင်သော်လည်း ငါးချီပြည့်သည်အထိ အလဲမထိုးနိုင်သဖြင့် အမှတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရာ တူးတူးက အနိုင်ရရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ထိုင်းဘုရင်က မြင့်မြတ်သော ဆင်ဖြူတော်ဝင်သူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြှင့်
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်က ပေးအပ်သည့် မြင့်မြတ်သော ဆင်ဖြူတော်ဝင်သူရဲကောင်း (Most Exalted Order of the White Elephant) ပထမအဆင့် ဂုဏ်ပြု ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က လက်ခံရယူခဲ့ ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ် ပြန်သည်။ ထိုင်းဘုရင်အနေဖြင့် ယင်း ဂုဏ်ပြုဘွဲ့တံဆိပ်ကို Knight Grand Cross ရာထူးအဆောင် အယောင်နှင့်တကွ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်၂၁ ရက်က တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ရာ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ကိုယ်စား ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan က ပေးအပ်ခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့တွင်း တားမြစ်လမ်းများသို့ဝင်ရောက်သော သုံးဘီးယာဉ်များကို အရေးယူရန်စီစဉ်
မန္တလေးမြို့တွင်း မဝင် ရသတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းများ တွင် မောင်းနေသည့် သုံးဘီး ယာဉ်များကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ မကြာမီ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ် ထိန်းတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အူရီးဒူး၏ အထက်မြန်မာပြည် ဒေသဆိုင်ရာရုံးကို မန္တလေးတွင် ဖွင့်လှစ်
အထက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလက်ဒေသများနှင့် မြို့စွန် များတွင် အူရီးဒူးဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ပေး ရန် အူရီးဒူးမြန်မာ၏ အထက် မြန်မာပြည် ဒေသဆိုင်ရာရုံးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က မန္တလေး မြို့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သံခေတ်ယဉ်ကျေးမှုမြေနေရာ၌ တူးဖော်ခိုးယူမှုမရှိရေး စောင့်ကြပ်ရန် ဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သံ ခေတ်ယဉ်ကျေးမှု မြေနေရာကို မသမာသူများ တရားမဝင် လာ ရောက်တူးဖော်ခိုးယူမှုများ ရှိနေ ၍ လုံခြုံရေးကြပ်မတ်ရန် သက် ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသို့ ညွှန်ကြားထားကြောင်း ရှေး ဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် သည်။